WinToFlash [Ny Bootable USB Mpamorona] topy maso ny endri-Javatra
Haingana, mora sy maranitra.
Ny tsara indrindra Bootable USB vahaolana afaka mahazo
Tsy mety ho avy ny andro izay optical aelin'ny toy ny sarotra ny mahita toy 5.25 floppy aelin'ny ireo amin'izao fotoana izao. Vaovao USB vanim-potoana ho avy!
WinToFlash dia mety hahatonga fahasamihafana lehibe ny fomba miasa. Izany dia hahatonga ny fiainana be dia be mora kokoa ho anao.
Haingana sy mametraka fotsiny ny fandaharam-potoana ianao, zavatra ilaina sy tsy fotoana amin'ny rehetra ianao dia hahita ny tenanao ny fanoratana fanadihadiana amin'ny Windows sy ny fampiasana ny bootable USB. Ny WinToFlash mahatonga ny asa manahirana maimaim-poana ho anao.
Koa, WinToFlash Lite dia maimaim-poana. Tsy mila mandoa vola mihitsy ho an'ny an-trano sy ny fialam-boly mampiasa!
Mametraka ny Windows avy ny bootable USB amin'ny fitaovana misy!
WinToFlash afaka hanangana bootable USB misy ankehitriny Windows Desktop sy Mpizara ny fianakaviana Setup. Rehetra ny fanontana azo ampiasaina ho - avy any an-Trano ny Farany, 32 na 64 bits.
WinToFlash dia tena mahery Windows Mandeha Mpamorona izay mamela anao hametraka sy mihazakazaka tanteraka ny asany Varavarankely rafitra miasa eo ivelany bootable USB flash na ny bootable fiara mafy. WinToFlash afaka mamorona Windows Mandeha bootable USB fiara avy amin'ny Windows dikan - /fanontana, na dia avy amin'ny fomba ofisialy raisina an-tànana.
Multiboot bootable USB fiara
Ahoana ny 5 isan-karazany ny Windows dikan -, velona linux, ivelan'ny aterineto antivirus sy ny fanarenana ny Live CD tao anatin ' ny bootable USB fiara? Tsy olana amin'ny rehetra! Ankehitriny ianao dia afaka mamorona Multiboot bootable USB amin'ny tsy VOAFETRA ny bootable zavatra eo amin'ny USB fiara. WinToFlash Multiboot manohana Windows rehetra avy amin'ny Windows Vista amin'ny Windows 10.
Samy hafa bootloaders
Mazava ho azy, tsy misy intsony ny mainty hampionona ny windows sy hafahafa rindrambaiko raha toa ka mila fitsipika tsy bootloader hapetraka. WinToFlash afaka mametraka izany ho azy, mifidy fotsiny GRUB4DOS eo amin'ny fanombohana loader pejy, raha toa ka ny faneva tsy ho enta-mavesatra amin'ny PC.
ISO, ZIP, RAR, TAXI, Fampirimana, CD na DVD
WinToFlash mivaky toy izao ny malaza rehetra fitoeran-javatra antontan-taratasy: ny sary sy ny arsiva aho. Tsy ilaina ny ny tendrombohitra ny fiara na ny unpack azy ireo tanana. Raha toa ianao ka fanandramana ny Windows Setup, ary ianao tsy te-pack izany ny ISO/ZIP isaky ny fitsapana - vao nametraka ny loharanom-ny antontan-taratasy ny laha-tahiry sy ny asa fanaovan-gazety hanomboka.
MS-DOS amin'ny bootable USB
Ny sasany motherboards mitaky ny taona fomba DOS namirapiratra fandaharana, WinToFlash dia mamorona ho anao bootable USB amin'ny MS-DOS ao anatin'ny fotoana fohy. Dika mitovy ny namirapiratra fandaharana ny bootable USB, reboot sy ny tselatra ny BIOS.
Na ny anao fotsiny te-hilalao tsara ny sasany DOS lalao eo amin'ny tena hardware?
FAT16, FAT32, NTFS, exFAT amin'ny CHS sy LBA niresaka
Mampiasa FAT16 CHS ao amin'ny nandroso ny fomba, raha ny motherboard tsy fanombohana ny USB fiara amin'ny FAT32 ny Windows XP Setup. Ianao dia manana safidy ho tsara kokoa ny fifampifanarahana azy sy ny troubleshooting. Tsara tine ' ny SABORANY rehetra safidy dia eo amin'ny asa fanompoana koa! Nametraka na inona na inona ny habeny ny fisarahana ilainao.
Ny sasany motherboards tsy fanombohana mandra-mampiasa CHS niresaka ho partitions sy hametraka ny rafitra. Noho izany, tsy misy, ny olana, WinToFlash afaka manao izany!
Tena mafy ankehitriny mba buy USB fiara latsaky ny 4Gb tao amin'ny fivarotana. Fa raha toa ka mila 512 Mb USB fiara ho fanombohana taloha DOS? WinToFlash dia mametra ny bootable USB misy habeny ilainao.
Hampavitrika izany safidy eo amin'ny Advanced mode, nametraka ny lanjany sy ny asa fanaovan-gazety Mihazakazaka!
Mombamomba hamonjy sy ny enta-mavesatra
Vonjeo ny bootable USB safidy ny rakitra sy ny entana azy ireo amin'ny fotoana rehetra ilainao.
Amin'ny antsipiriany ny vatan-kazo rakitra
Ny olana? Tsy afaka ny hahatakatra ny fahadisoana? Jereo ny vatan-kazo rakitra - valiny dia tsy misy.
Feno ny lisitry ny WinToFlash endri-javatra
Fitetezana ny mombamomba pejy sy ny hamaky bebe kokoa momba ny WinToFlash endri-javatra